बामदेव गौतम | Ratopati
प्रचण्डलाई ‘गो अहेड’ भन्ने बामदेव एकाएक ‘यूटर्न’ access_timeसाउन १३, २०७७
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको आन्तरिक विवादमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न केही अघि नै तयारी अवस्थामा थिए, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम । सो विषय समाचारको रुपमा बाहिर आएको पनि थियो । तर, साउन ६ गते उनको निजी सचिवालयले वामदेव गौतमले पार्टीभित्...
नेकपा बैठकमा बामदेव गौतमको प्रश्न–कसको कारणले पार्टी गम्भीर मोडमा पुग्यो ? access_timeसाउन १३, २०७७
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले कसको कारणले पार्टी गम्भीरमा मोडमा पुग्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले अध्यक्षद्वयको पदको लडाइँमा पर्न नचाहेको भन्दै आफू वैचारिक रुपमा सुदृढ नेकपाको पक्षमा रहेको बताए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र ...
खगराजले खुलाउलान त बामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो ? access_timeबैशाख २१, २०७७
पोखरा । लामो रस्साकस्सीपछि आइतबार नेकपाको किंचलो साम्य भयो । यद्यपि, नेकपाको यो विवाद जुनसुकै बेला पनि बल्झिन सक्छ । सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लौजाने निर्णय गरेसँगै विवाद त साम्य भयो । तर, नेकपाले बामदेवलाई कसरी प्रतिनिधि सभामा लैजान्छ भन्...
बामदेवको यात्रा मोडिएपछि खतिवडा सुरक्षित access_timeबैशाख २१, २०७७
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमार्फत उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउने निर्णयसँगै हाल सांसदबिनै मन्त्री रहेका डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभाको सांसद बन्न सहज हुने भएको छ । यसअघि २ वर्षका लागि सरकारको स...
बामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने नेकपाको निर्णय access_timeफागुन १४, २०७६
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गर्ने भएको छ । बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न सरकारलाई सुझाव दिने...
उपाध्यक्ष वामदेवले २ नम्बर प्रदेशबाट काम थाल्ने access_timeमाघ २१, २०७६
काठमाडौं । केन्द्रीय समिति बैठकबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता वामदेव गौतम २ नम्बर प्रदेशको विवाद मिलाउन खटिने भएका छन् । संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका गौतमले माघ २२ गते बुधबारबाट २ नम्बर प्रदेशको विवाद मिलाउन खटिने जनाए...
कास्की–२ बाट चुनाव नलड्ने बामदेव गौतमको घोषणा access_timeअसोज ४, २०७६
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रस्तावित उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले कास्की–२ बाट उपनिर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका छन् । उपाध्यक्ष गौतमले शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकलाई आफू कास्की जिल्लाको रिक्त प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी नदिन...